Taliska ciidanka xoogga dalka oo ka warbixiyay howl galkii Toora-Toorow – STAR FM SOMALIA
Taliska ciidanka xoogga dalka oo ka warbixiyay howl galkii Toora-Toorow
aliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faah faahin ka bixiyay howl gal habeen hore ciidamada sida gaarka ah u tababaran ka sameeyeen deegaanka Toora-Toorow ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Howl galkan ayaa waxaa fuliyay ciidamada qaaska ah ee loo yaqaano Danab, waxaana la sheegay inay taageero ka helayeen Ciidamo Mareykan ah.
War saxaafadeed ka soo baxay Taliska Ciidamada Xoogga dalka ayaa lagu sheegay in abaarihii 4:00 ay ciidamada kumaandooska howl gal qorsheysan ka fuliyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen Toora-Toorow.
“Ciidamada sida gaarka ah u tababar ee Danab ayaa Salaadii Subax Xilli ku dhaw howl-gal qorsheysan ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku uruuriyaan waxa ay ku ugu Uguyeeraan Zakawaadka oo ay ku boobaan hantida shacabka ku nool deegaankaasi, ujeedka ciidanka wuxuu ahaa in saldhiggaas ay burburriyaan, weyna ku soo guuleysteen”ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Sidoo kale Warsaxaafadeedka Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in howlgalka intii ay ciidamada ku guda jireen ay ku qaarajiyeen Saraakiil iyo rag kale oo ka tirsan kooxda Al-shabaab ee ku sugnaa saldhigga la bur burriyay.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiysay inay ciidamadeeda ay ku lug lahaayeen weerarka, balse ma aysan bixin faah-faahin intaas dheer.
Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegay inay fashiliyeen weerar ay ku soo qaadeen Ciidamo Mareykan ah oo watay diyaarado Helicopter, ayna iska caabiyeen, isla markaana khasaare u geysteen.
Bishii Maarso ayaa ciidamada kumaandoosta ee Soomaalida iyo kuwa Maryakanka ay hawlgal wadajir ah ka sameeyeen deegaanka Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay Ururada dhalinyarada, kalana hadlay ka qeyb galka siyaasada